Sugar Geek Show - ရွှေယိုနှင့်အတူအရသာသက်တံ့ရောင်ကိတ်မုန့် - ကိတ်မုန့်
စိုထိုင်းသော vanilla buttermilk cake နှင့်အလွယ်တကူ buttercream အေးခဲသောအလွှာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအိမ်လုပ်သက်တန့်ကိတ်မုန့်
ဒီသက်တန့်ကိတ်မုန့်ကကျွန်တော့်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်။ ဒီလှပတင့်တယ်လှပသည့်အလွှာအားလုံးကိုတွေ့မြင်ရန်ကျွန်ုပ်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်လုံးဝနှစ်သက်သည်။ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒီသက်တံ့ကိတ်မုန့်ရူပရုံအဘို့မဟုတ်, ကလုံးဝအံ့သြဖွယ်အရသာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ် ဦး အစအနကျန်ကြွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဒီသက်တန့်ကိတ်မုန့်ကကျွန်တော့်အတွက်အထူးပဲ။ ငါကအချိန်ကြာမြင့်စွာလုပ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရတယ်။ ငါတို့သား Ezra နဲ့ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတာကိုသိကတည်းကသူ့ကိုသူ့သက်တန့်ကိတ်မုန့်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ မွေးနေ့ဝက် (6 လ)။
လူအများစုကကျွန်မတို့ချစ်သူ Avalon ကိုရဖို့ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မဟာမျိုးမပွားနိုင်တဲ့ကုသမှုများစွာကိုခံယူခဲ့ရတယ်။ ငါကရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘူး။ မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မည်မျှတွေ့ရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ပိုမို၍ ပြောဆိုသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့တစ်ယောက်တည်းခံစားရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကငါတို့ကုသမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ဘာမှမအလုပ်လုပ် ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကကျွန်တော့်ကိုတိုက်ခိုက်နေတယ် ငါစိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းသောနေရာတွင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ဒါဟာရူးသွပ်နေပုံရပေမယ့်ကျွန်မမှာသားတစ်ယောက်ရခဲ့တယ်။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါမျှော်လင့်ချက်အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်။
အိမ်မှာ gummies ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ငါတို့မှာဒုတိယကလေးရမယ်လို့ရိုးရိုးသားသားစွန့်လွှတ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်မတို့ကိုဒုတိယစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရခဲ့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး
ဒီကုသမှုတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကြက်ဥတစ်လုံးတည်းနဲ့ကျွန်မတို့အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ သင် IVF မှတဆင့်သွားပြီဆိုရင်။ ကြက်ဥတစ်လုံးတည်းစားသုံးရန်အခွင့်အလမ်းအလွန်နည်းသည်ကိုသိပါ။ ငါမျှော်လင့်ချက်မတက်ခဲ့ဘူး
ဒါပေမယ့်ကြက်ဥတစ်လုံးကပ်လိုက်တယ်။ ဒီမှာငါတို့လှပသောကလေးယောက်ျားလေးနှင့်အတူရှိ မုန်တိုင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်တံ့။ ငါတို့ရဲ့ကံကြမ္မာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစု၏ပြီးစီး။
ငါတို့အကြိုက်ဆုံးကိတ်မုန့်၊ အဖြူရောင်ကတ္တီပါကိုသုံးတော့မယ်။ သာမက။ ဒီကိတ်မုန့်အရသာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သူကလည်းအရောင်ယူလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လည်းအလွန်ဖြူရဲ့။
ကြက်ဥအနှစ်ပါတဲ့ vanilla ကိတ်မုန့်ထဲကိုအရောင်ထည့်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မုန့်ဖုတ်နေစဉ်မှာပဲဒီအနှစ်တွေဟာသင့်အရောင်တွေကိုပျက်ပြားသွားစေပါတယ်။
ငါအဖြူရောင်ကတ္တီပါထဲကိုအရောင်ပေါင်းများစွာထည့်ပြီးပြီ၊ ပန်းရောင်ကတ္တီပါ၊ အစိမ်းရောင်ကတ္တီပါနဲ့အပြာရောင်ကတ္တီပါမှအရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါ texture အမြဲအံ့သြဖွယ်ထွက်လှည့်။
သင်၏ 8″ x2″ ကိတ်မုန့်များကိုအဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပါ။ သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်အိုးအားလုံး (တူညီတဲ့အရွယ်အစား) (၆ လုံးလုံး) မရှိနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်သင့်ကိတ်မုန့်ဖုတ်နေချိန်မှာသင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်ကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားပါ။ သူတို့ကတကယ့်ကိုပါးလွှာတယ်။
သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်ကိုအပေါ်ယံလွှာထဲထည့်ပါ ကိတ်မုန့် သင်၏မီးဖိုကို ၃၃၅ ºFအထိအပူပေးပါ။ ပါးလွှာတဲ့စက္ကူအပိုင်းအစတစ်ချပ်ကိုလည်းကျွန်တော့်အိုးအောက်ခြေမှာထားလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကပါးလွှာတဲ့အတွက်ဒယ်အိုးထဲကနေထုတ်ဖို့ပိုလွယ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တန့်ကိတ်မုန့်အလွှာဖြစ်စေရန်သင်လုပ်ရမည့်အရာမှာသင်၏ Battery ကိုရောနှောပါ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) ပြီးလျှင်သင်၏ Battery ကို ၆ ခွက်ညီမျှသည်။
ပန်းကန်လုံးတွင်ကိတ်မုန့် ၁၅ အောင်စရှိသည်။ ငါကသုံးတယ် မီးဖိုချောင်စကေး ငါ့အလေးကိုချိန်ခွင်ကညီမျှမယ်။
ငါ Americolor မှလျှပ်စစ်အရောင်များကိုသုံးပြီး၊ ငါသက်ရောက်မှုသက်တံရောင်ရာကိုမလုပ်ဘူး၊ ဒီသက်တံဟာ Lisa ဖရန့်စတိုင်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာစူပါတောက်ပတဲ့နီယွန်အရောင်တွေကိုထုတ်လုပ်ကြတာကြောင့်သင်ဟာအရောင်များစွာကိုသုံးစရာမလိုသောကြောင့်ဤလျှပ်စစ်အရောင်များကိုငါတကယ်သဘောကျသည်။
လိမ္မော်ရောင်အတွက်လိမ္မော်ရောင်အနည်းငယ်နှင့်အဝါရောင်နည်းနည်း သုံး၍ လိမ္မော်ရောင်ကိုပိုမိုတက်ကြွစေရန်။
သင်၏ Battery ကိုသင်၏ကိတ်မုန့်များထဲသို့လောင်းပါ (ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကြိမ်လျှင်သုံးချက်ဖုတ်ပြီးဒယ်အိုးတစ်ခုစီတွင် ၁၅ အောင်စဘက်ထရီထည့်သည်) ။
ငါကိတ်မုန့်များ၊ အညိုရောင်နှစ်ဖက်နှင့်အညိုရောင်အောက်ခြေတို့ကိုချုံ့ခြင်းမပြုမီကိတ်မုန့်များကိုရေခဲသေတ္တာထဲသို့မိနစ် ၃၀ ခန့်ထားခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တံကိတ်မုန့်ကိုအလှဆင်ဖို့အချိန်! ငါ့ဟာသုံးတယ် လွယ်ကူသော buttercream ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းအတူတကွလာပါတယ်။ သငျသညျကြိုက်နှစ်သက်သော်လည်းမဆို buttercream ကိုသုံးနိုင်သည် ဆွစ်ဇာလန် meringue buttercream , အီတလီ meringue buttercream သို့မဟုတ်ပင် မုန့်ဒိန်ခဲနှင်းခဲ ။
သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအလွှာကိုသင်၏ကိတ်မုန့်ဘုတ်ပေါ်သို့တင်ပါ။ ငါသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပိုမိုလွယ်ကူစေရန်တစ် turntable အပေါ်လုပ်ဆောင်နေတာပါ။
buttercream ပါးလွှာသောလွှာကိုအသုံးပြုပါ။ နှင်းခဲ၏ 1/4 for ရိုက်ကူးပါ။
သင့်ရဲ့လှံတံကိုလှပချောမွေ့စွာထားပါ၊ ဒါဆိုသင့် buttercream သည်အထူသာရှိမည်။
ငါခရမ်းရောင်နဲ့စတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းကိုသွားချင်ရင်ပန်းရောင်နဲ့စနိုင်တယ်။
ကျန်ရှိနေသေးသောအလွှာများနှင့်ဤနည်းကိုနှင်းခဲများနှင့်ပုံသွင်း။ ဆက်၍ ပြီးလျှင်ကိတ်မုန့်တစ်လုံးလုံးကိုသက်တန့်လုံးများပေါ်တွင်တံဆိပ်ခတ်ရန်ကောင်းသောအင်္ကျီတစ်ထည်ကိုပေးပါ။
သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်ကို ၁၅ မိနစ်ခန့်အေးအောင်လုပ်ပါ။
သင်၏ကိတ်မုန့်ကို buttercream ၏နောက်ဆုံးအလွှာဖြင့်အပြီးသတ်ပြီးသင်၏ခုံတန်းရှည်ကိုခြစ်ခြင်းနှင့်ချွတ်လိုက်သော spatula ဖြင့်ချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ။
ငါနှင့်အတူဤကိတ်မုန့်ပြီးအောင်တာပါ ရေ ganache ယို ။ ငါသကြားလုံးဖြူ ၅ အောင်စ၊ ချောကလက်သကြားလုံး ၁ အောင်စနဲ့ရေ ၆ အောင်စကိုသုံးခဲ့တယ်။
အရည်ပျော်ပြီးတဲ့နောက်ရွှေဝါရောင်ဖယောင်းတိုင်တွေအရည်ပျော်အောင်လုပ်ဖို့လျှပ်စစ်အဝါရောင်အစားအစာအရောင်အနည်းငယ်ကိုထည့်လိုက်တယ်။ ငါသည်ဤရေ ganache ငါ၏အအေးကိတ်မုန့်ပေါ်သို့ယို။ ထိုအခါအချို့နှင့်အတူရွှေခြယ်သ တကယ်တော့ရူးသွပ်ပလတ်စတစ်ရွှေမှုန့် နှင့်ဗော့ဒ်ကာ။
ထိုအခါငါထိပ်ပေါ်မှာအဖြူနှင်းခဲအချို့သော swirls ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အခြားဖြန်းအချို့ကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငါ swirls လုပ်ဖို့ 1M ပိုက်အစွန်အဖျားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ငါတို့သည်ငါတို့၏သက်တံ့ကိတ်မုန့်နှင့်အတူပြီးပြီ! ဒါတော်တော်လေးကြည့်ရှုမထားဘူး! ငါချပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူတို့ကဒီလရဲ့ Ezra ဓာတ်ပုံကိုပြီးပြည့်စုံသောဝဲဘယ်လောက်ချစ်ကြတယ်။
ဒီသက်တံ့ကိတ်မုန့်ဟာလှပပြီးအရောင်တောက်တောက်ရုံတင်မကဘဲအရသာလည်းကောင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကျော်ကြားသောအဖြူရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်နှင့်ပြုလုပ်ထားသောလွယ်ကူသော buttercream မှပြုလုပ်ထားသောဤသက်တန့်ကိတ်သည်အကောင်းဆုံးသောအခါသမယကိုကိတ်မုန့်ပြုလုပ်သည်။ * note * အကယ်၍ သင်သည်ကိတ်မုန့်အရွယ်အစားကိုဂဏန်းတွက်စက်ဖြင့်ချိန်ညှိပါကအိုးများသည်တစ်ဝက် (၁ 'အမြင့်) သာဖြည့်သင့်သည်ကိုသတိရပါ၊ အလွှာများသည်အလွန်ကြီးလွန်းသည်။ ဂဏန်းတွက်စက်ကိုအလွှာ ၂ 'အလွှာအတွက်ရေးဆွဲထားသည်။ ပြင်ဆင်ချိန် -နှစ်ဆယ် မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -နှစ်ဆယ် မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၄၀ မိနစ် ကယ်လိုရီ853kcal
▢၂၄ oz (680 ဆ) မုန့်ညက်မုန့်ညက်
▢၂၄ oz (680 ဆ) သကြားဓာတ်
▢နှစ် Tbsp (နှစ် Tbsp) မုန့်ဖုတ်ပေါင်ဒါ
▢၁၀ oz (၂၈၃ ဆ) ဥအဖြူ အခန်းအပူချိန်
▢၆ oz (၁၇၀ ဆ) ဟင်းရွက်ဆီ
▢၁၈ oz (510 ဆ) နို့ အခန်းအပူချိန်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်နွေး
▢၁၂ oz (340 ဆ) ထောပတ် unsalted နှင့်ပျော့ပျောင်း
▢၁ ဇွန်း (၁ ဇွန်း) vanilla ထုတ်ယူ
လွယ်ကူသော Buttercream Frosting ပါဝင်ပစ္စည်းများ
▢၈ oz (၂၂၇ ဆ) Pasteurized ကြက်ဥလူဖြူ
▢၃၂ oz (907 ဆ) unsalted ထောပတ် ပျော့ပျောင်းပေမယ့်အရည်ကျိုမဟုတ်
▢၁ အစက် (၁ အစက်) ခရမ်းရောင်အစားအစာအရောင် အဆိုပါ buttercream အဖြူစေရန်
▢၅ oz (၁၄၂ ဆ) သကြားလုံးဖြူအရည်ပျော်သည်
▢၁ oz (၂၈ ဆ) ချောကလက်သကြားလုံးအရည်ပျော်
▢၁ oz (၁၇၀ ဆ) ရေပူ
▢၁ Tsp အမှန်စင်စစ်အရူးပလတ်စတစ်စူပါကိုရွှေဖုန်မှုန့်
▢1/4 Tsp everclear သို့မဟုတ်ဗော့ဒ်ကာ သို့မဟုတ်သံပုရာထုတ်ယူ
မှတ်ချက် - အထက်ဖော်ပြပါအခန်းအပူချိန်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အခန်းအပူချိန်နှင့်အလေးချိန်အားဖြင့်တိုင်းတာထားသောကြောင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများမှန်ကန်စွာရောစပ်။ ပေါင်းစပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ 335º F / 168ºCသို့မီးဖိုကိုအပူပေးပါ
ကိတ်မုန့်နှင့်အတူ (၈'x2 ') ကိတ်မုန့်ခြောက်လုံးကို ပြင်ဆင်၍ ကိတ်မုန့်ကိုလွယ်ကူစွာဖယ်ရှားရန်ဒယ်အိုးအောက်ခြေရှိသားရေစာစက္ကူတစ်ချောင်းကိုတင်ပါ။
အဆိုပါထောပတ် 8 oz အတူတကွပေါင်းစပ်နှင့်ဘေးဖယ်ထား။
ကျန်ရှိနေသောထောပတ်၊ ကြက်ဥအဖြူနှင့် vanilla တို့ကိုအတူတကွပေါင်းစပ်။ ကြက်ဥပြိုကွဲရန်ဖယ်ထားပါ။
သင်၏နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်များကိုခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများထဲသို့ထည့်ပြီးအရောအနှောသည်ကြမ်းတမ်းသောသဲ (စက္ကန့် ၃၀ ခန့်) နှင့်မတူသည်အထိရောနှောပါ။
သင်၏နို့ / ရေနံအရောအနှောထဲထည့်ပြီးခြောက်သွေ့သောအာဟာရများစိုစွတ်အောင်မွှေပေးပါ။ ထို့နောက် med သို့တက်ပါ (ကျွန်ုပ်၏ KitchenAid တွင်အမှတ် ၄ ထားပါ) ကိတ်မုန့်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်မိနစ် ၂ မိနစ်ရောပါစေ။ သင်ဤအဆင့်တွင်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုရောမွှေပါကသင်၏ကိတ်မုန့်ပြိုကျနိုင်သည်။
သင်၏ပန်းကန်လုံးကိုခြစ်ပြီးအမြန်နှုန်းကိုအနိမ့်သို့လျှော့ချပါ။ သင်၏ကြက်ဥအဖြူ / နို့မှုန့်ကိုအပိုသုံးမျိုးဖြင့်ထည့်ပါ၊ ဖြည့်စွက်ချက်အကြား Batter Batter ကိုရောနှောနိုင်သည်။ အားလုံးပါဝင်သည်သေချာစေရန်နှစ်ဖက်စလုံးကိုထပ်မံခြစ်ပါ။
သင့်ရဲ့ Battery ကို6ခွက်သို့ဝေယူပါ။ ပန်းကန်လုံးအတွက် ၁၅ အောင်စကိုချိန်ပါ။
ပန်းကန်တစ်ခုစီကိုသင်၏လျှပ်စစ်အစားအစာအရောင်များဖြင့်အရောင်ခြယ်ပါ။ ပန်းရောင်အလွှာအတွက်ပန်းရောင်အတွက် 1/2 Tsp၊ လိမ္မော်ရောင်အလွှာအတွက် 1/4 Tsp အဝါရောင်၊ လိမ္မော်ရောင် 1/4 Tsp လိမ္မော်၊ အဝါရောင်အလွှာအတွက် 1/2 Tsp အဝါရောင်, အဝါရောင် 1/4 Tsp ပေါင်းအစိမ်းရောင် layer အတွက်အစိမ်း 1/2 Tsp, အပြာအလွှာအတွက် 1/2 Tsp အပြာ၊ ခရမ်းရောင်အလွှာအတွက် 1/4 Tsp ပန်းရောင်နှင့် 1/2 Tsp ခရမ်းရောင်။
သင်၏အလွှာများကို ၂၀-၂၄ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ရမည်။ သို့မဟုတ်နံရံများကိတ်မုန့်ထုပ်မှဝေးရာသို့ထွက်သွားသည်အထိဖြစ်သည်။ မဖိတ်ပါနှင့်သို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်အလယ်သည်ပြိုကျလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကိတ်မုန့်ကနေရေနွေးငွေ့ကိုလွှတ်ပေးရန်တစ်ချိန်ကကောင်တာပေါ် PAN FIRMLY ချက်ချင်းထိပုတ်ပါ။ ဤသည်ကိတ်မုန့်ကနေကိတ်မုန့်ကိုရပ်။
ကိတ်မုန့်များကိုဒယ်အိုးထဲ၌ ၁၀ မိနစ်ခန့်အေးဆေးထားပါ။ ကိတ်မုန့်အနည်းငယ်ကျုံ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကပုံမှန်ပါပဲ။ သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုချုံ့ခြင်းမပြုမီမိနစ် ၃၀-၆၀ တွင်သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုအေးခဲအောင်လုပ်ပါ။ Frost နှင့် buttercream နှင်းခဲနှင့်အတူဖြည့်ပါ။
မင်းရဲ့ buttercream ချောချောမွေ့မွေ့ပြီးတဲ့နောက်ကိတ်မုန့်ကိုအသုံးမပြုခင်ကိတ်မုန့်ကိုရေခဲသေတ္တာထဲ ၁၅ မိနစ်ပြန်ထည့်ပါ။
ရွှေဆေးသုတ်ခြင်းမပြုမီသင်၏ချိန်းထားရန်စောင့်ပါ။ ကိတ်မုန့် buttercream rosettes နှင့်ပိုပြီးဖြန်းနှင့်အတူပြီးအောင်။
သင်၏အရောအနှောရောနှောထားသောပန်းကန်လုံးတွင်အမှုန့်သကြားနှင့် Pasteurized ကြက်ဥအဖြူများကိုချဉ်သောတွဲများနှင့်ထားပါ။
ရောနှောနေစဉ်ထောပတ်ငယ်လေးများကိုထည့်ပါ။ ထောပတ်အားလုံးကိုထည့်သွင်းသည်အထိဆက်ပြီးရောနှောပါ။ ထို့နောက် vanilla နှင့်ဆားထည့်ပါ။
အလင်းနှင့် fluffy သည်အထိမြင့်မားသောအရောအနှောနှင့်ထောပတ်ကဲ့သို့အရသာမရှိတော့ပါ။ အဆိုပါ buttercream ၏အဝါရောင်အသွင်အပြင် (optional ကို) လျှော့ချရန်ခရမ်းရောင်အစားအစာအရောင်၏အစက်ထည့်ပါ။
အဆိုပါ whisk ပူးတွဲဖိုင်ကိုဖယ်ရှားနှင့်လှော်ပူးတွဲမှုနှင့်အတူကအစားထိုးပါ။ buttercream မှပူဖောင်းများကိုဖယ်ရှားရန်အနိမ့်ကို ၁၀ မိနစ်ရောစပ်ပါ။
နီးပါးအပြည့်အဝအရည်ကျိုသည်အထိ 15 စက္ကန့်တိုးနဲ့ချောကလက်မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာအရည်ပျော်။
သင်၏ရေပူထဲသို့ထည့်ပြီးနောက်ထပ် ၁၅ စက္ကန့်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ကိုထည့်ပါ
ချောမွေ့သည်အထိမွှေပေးပါ။ ထိုအခါသင်၏အဝါရောင်အစာအရောင်အတွက်ထည့်ပါ။ ချောမွေ့သည်အထိမွှေပေးပါ။
ရေပိုက်ထဲသို့ပိုက်ကွန်ထဲသို့ထည့်ပါ။ အစွန်အဖျားမှဖယ်ထုတ်ပြီးသင်၏အေးခဲနေသောကိတ်မုန့်စွန်းတွင် ganache ကိုယိုပါ။ ၎င်းပြီးနောက်သင်၏ရွှေဖုန်နှင့်ဗော့ဒ်ကိုအတူတကွရောစပ်။ အစက်အပြောက်ရှိသောရွှေကိုဆေးသုတ်နိုင်သည်
ဤကိတ်မုန့်သည်အလွန်မြင့်မားသော (၇ ံခန့်) ရှိသောကြောင့်သင်၏အချပ်သည်အလွန်မြင့်သည်။ သူတို့ကိုသင်တစ်ဝက်လောက်ဖြတ်နိုင်ပေမဲ့သင်ကသက်တံကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်။ * note * အကယ်၍ သင်သည်ကိတ်မုန့်အရွယ်အစားကိုဂဏန်းတွက်စက်ဖြင့်ချိန်ညှိပါကအိုးများသည်တစ်ဝက် (၁ 'အမြင့်) သာဖြည့်သင့်သည်ကိုသတိရပါ၊ အလွှာများသည်အလွန်ကြီးလွန်းသည်။ ဂဏန်းတွက်စက်ကိုအလွှာ ၂ 'အလွှာအတွက်ရေးဆွဲထားသည်။ သင်သတိမပြုမိရန်အရေးကြီးသောအရာများ 1. သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုယူလာပါ အခန်းအပူချိန် သင့်ရဲ့ဘက်ထရီပြတ်တောက်မသွားအောင်သို့မဟုတ်နွေးထွေးမှုအနည်းငယ် (ဥများ၊ ထောပတ်နို့၊ ထောပတ်စသည်) ပင်။ 2. မှစကေးကိုသုံးပါ သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအလေးချိန် (အရည်များအပါအ ၀ င်) မဟုတ်ပါကညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါ (ဇွန်း၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၊ အဖြစ်တော့စသည်) ။ မက်ထရစ်တိုင်းတာမှုစာရွက်ကဒ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစားပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ခွက်များအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုမိုတိကျပြီးသင်၏စာရွက်၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေသည်။ ၃။ Mise en Place လေ့ကျင့်ပါ။ သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုကြိုတင်တိုင်းတာ။ တစ်ခုခုမတော်တဆထွက်ခွာရန်အခွင့်အလမ်းများကိုလျှော့ချရန်သင်မရောစပ်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ 4. နှင်းခဲများမဖြည့်ခင်ကိတ်မုန့်များကိုအေးအောင်လုပ်ပါ။ နှင်းခဲနှင့်အေးခဲနေသောကိတ်မုန့်ကိုသင်လိုချင်လျှင်ဖောင့်ထဲတွင်ထည့်နိုင်သည်။ ဤသည်ကိတ်မုန့် stacking အဘို့လည်းကြီးလှ၏။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူစေရန်မပို့မီကျွန်ုပ်၏ကိတ်မုန့်များကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်အမြဲထားလေ့ရှိသည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ သင်၏ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုအလှဆင်သည်။ ၅။ အကယ်၍ စာရွက်သည်မုန့်ညက်ကဲ့သို့သောတိကျသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတောင်းဆိုပါက၊ ၎င်းသည်အဆင်ပြေကြောင်းစာရွက်တွင်မဖော်ပြထားပါက၊ ရည်ရွယ်သည့်ဂျုံမှုန့်၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအစားထိုးဒီစာရွက်ပျက်ကွက်စေနိုင်သည်။ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောဂျုံမှုန့်သည်မြင့်မားသောအေးဂျင့်များမရှိသောလွင်ပြင်ဂျုံဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပရိုတင်းပမာဏ ၁၀% မှ ၁၂% အထိရှိသည်။ ဂျုံမှုန့်သည်ပျော့ပျောင်း။ အနိမ့်ပရိုတိန်းဂျုံမှုန့်ဖြစ်ပြီး ၉% သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်။
အစပြုသူအဘို့အလွယ်ကူသော fondant icing စာရွက်
အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်အဘို့အဒိန်ခဲဒိန်ခဲ icing များအတွက်စာရွက်
ကိတ်မုန့်များအတွက်တောက်ပသော icing လုပ်နည်း